Home » Serivisy fampandrenesana tariby » Ny fironana 3 ambony misy fiantraikany amin'ny fampiasana tsena lamba miaro indostrialy
Selbyville, Delaware, Etazonia, Novambra 5 2020 (Wiredrelease) Global Market Insights, Inc -: Ny tsenan'ny lamba fiarovana ny indostrialy dia singa iray lehibe amin'ny mpamono afo sy ny akanjo eny amin'ny habakabaka, ny fitafiana miaro ary ny fahasalamana satria manome fanoherana fanoherana ambony izy ireo ary koa aerosol simika sy mampidi-doza. Ny fitaovana dia hafanana ary koa mahatohitra flameproof ary manome fiarovana ny fiarovana ny mpiasa sy ny fahombiazan'ny asa. Ny fandrosoana amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny lozam-pifamoivoizana eo amin'ny toeram-piasana dia hitarika ny vinan'ny indostria mandritra ny taona ho avy.
Milliken & Company, DowDupont, W. Barnet GmbH & Co. KG., TenCate Protective Fabric, ary Teijin Limited, dia sasany amin'ireo mpamokatra lamba fiarovana indostrialy. Raha ny voalaza dia izao tontolo izao tsenan'ny lamba fiarovana indostrialy ny habe dia hahatratra $ 9 miliara dolara isan-taona, amin'ny 2025.
Aleo fitaovana polyethylene sy polypropylene
Ny tsenan'ny lamba fiarovana indostrialy polyethylene dia antenaina mitentina hatrany amin'ny 70 tapitrisa dolara hatramin'ny 2025, raha jerena ny fampiasana betsaka azy ireo amin'ny fanamboarana akanjo vita amin'ny bala sy fampidirana fanampiny, manolotra fiarovana amin'ny balistik amin'ny fiarovan-doha, fiara, sambo an-dranomasina, ary tontonana fiadiana fiaramanidina. Ny fangatahana ireo vokatra dia ho entina ihany koa noho ny fihenan'ny fihenan'ny angovo misy akony ary koa ny fananana ivelany.
Misy fanamafisana ny lamba polypropylene manerana ny fampiharana ara-pitsaboana sy ny fahadiovana ary koa lamba fitafiana miaro ny marary sy ny lamba fandidiana mpandidy, manondro ireo fananana manohitra ny mikraoba. Izy io dia azo tratran'ny fanomezana simika, havizanana ary fanoherana ny hafanana, miaraka amin'ny fandikana, ny hamafin'ny semi-henjana, ny fananana miharo volo amin'ny akora.
Mangataka kopia santionany amin'ity tatitra ity @ https://www.gminsights.com/request-sample/detail/3264
Alemanina sy Sina hanoritra ny faritry ny faritra
Ny tsenan'ny lamba fiarovana indostrialy any Alemana dia vinavinaina hahatratra ny CAGR 6.5% hatramin'ny 2025, raha jerena ny firongatry ny tetik'asa fananganana vokatry ny fitomboan'ny fandaniana amin'ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa ho an'ny daholobe ary ny fampindramam-bola amin'ny tahan'ny zanabola ambany. Misy ny fangatahana tsy miovaova ho an'ny akanjo fiarovana manokana manerana ny sehatry ny fananganana satria ny fitaovana dia miaro amin'ny fianjerana, voadonan'ny zavatra iray, ary ny loza ateraky ny herinaratra.
China dia azo raisina ho iray amin'ireo mpanjifa voalohany amin'ny lamba fiarovana indostrialy ary ny tsena isam-paritra dia mety hanangona USD 950 tapitrisa amin'ny fidiram-bola isan-taona amin'ny 2025. Izany dia vokatry ny fanohanan'ny governemanta amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra toa ny "Made in China 2025" izay nitarika ny nitombo ny asa fanamboarana. Ary koa, ny fenitra henjana toy ny "Order no 70 amin'ny lalàn'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina momba ny fiarovana ny mpiasa" dia nandidy ny fiarovana ny mpiasa miaraka amin'ny fanaraha-maso ny asa fanodinana azo antoka any amin'ny faritra.
Mitombo ny fangatahana fiarovana sy fiarovana
Ny anjaran'ny tsenan'ny lamba fiarovana amin'ny indostrialy avy amin'ny fitoriana ataon'ny mpamono afo dia miorina amin'ny CAGR 7.5% amin'ny taona ho avy, satria ny lamba dia manampy amin'ny fivezivezin'ny rivotra, ny fanoherana ny hamandoana ary manome fiarovana sy fiarovana simika. Ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe sy ny fotodrafitrasa dia nahatonga ny fangatahana avo kokoa amin'ny rafitra mpamono afo.
Ohatra, Aramar dia azo lazaina ho lamba fiarovana indostrialy namboarina manokana ho an'ny mpamono afo, mpamono afo ary ala fiarovana. Natao hanomezana fiarovana sy fampiononana faran'izay betsaka izy ireo ankoatry ny fanomezana fanohanana amin'ny endrika insulation amin'ny hafanana, fanoherana ny afo, ny fitafiana ary ny rovitra.
Fangatahana fanaingoana @ https://www.gminsights.com/roc/3264
Ny fangatahana fangatahana fitafiana amin'ny efitra fidiovana dia tombanana hitondra anjara lehibe amin'ny taona ho avy raha jerena ny andraikitry ny lamba hametra ny fivezivezena sombina toy ny vovoka, mikraoba, etona ary aerosol avy amin'ireo mpiasa indostrialy mankany amin'ny tontolo ivelany. Misy fiakarana lehibe eo amin'ny hetsika R&D manerana ny sehatry ny pharmaceutika sy biotechnology mitarika ny fangatahana mitombo ho an'ny efitrano fidiovana.
Ny torolàlana toy ny Regulation (EU) 2016/425 hanome fitaovana fiarovana manokana dia niantoka ny fandefasana fari-pitsipika mahomby ho an'ny vokatra PPE manerana ny kaontinanta eropeana mba hanome fiarovana tsara kokoa amin'ny loza. Ireo vokatra dia mahita fampiasana be dia be amin'izao vanim-potoana COVID-19 izao. Ny fampiharana ny indostrian'ny OSHA ankapobeny ary koa ny fenitra PPE fananganana napetraky ny governemanta amerikana dia nitazona ny fiarovana ny mpiasa.
Momba ny fijerena ny tsena manerantany:
Global Market Insights, Inc., miasa ao amin'ny Delaware, Etazonia, dia fikarohana momba ny tsena manerantany sy mpanome tolotra consulting; manolotra ny tatitra momba ny fanadihadiana sy ny fomba amam-panao sy ny serivisy momba ny fitomboana. Ny tatitra momba ny fahitan-tsika sy ny fikarohana momba ny indostria dia manolotra ireo mpanjifa manana fijery mivoitra sy angon-drakitr'asa marika azo tanterahina ary aseho ho fanampiana ireo fanapahan-kevitra stratejika. Ireo tatitra tsy manam-paharoa ireo dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fomba fikarohana fikarohana momba ny fananana ary azo alaina amin'ny indostrian'ny indostria toy ny simika, fitaovana mandroso, teknolojia, angovo azo havaozina sy biôlôjia.
Olona mifandray: Arun Hegde
Varotra orinasa, Etazonia
Ity atiny ity dia navoakan'ny orinasa Global Market Insights, Inc. Ny Departemantam-baovao WiredRelease dia tsy nandray anjara tamin'ny famoronana an'ity atiny ity. Ho an'ny fanadihadiana momba ny serivisy famoahana gazety, azafady azafady [email voaaro].